ইভেন্টब्राइट + टीस्प्रिंग: टी टिकटहरू तपाईंको टिकटहरूसहित बेच्नुहोस् Martech Zone
हामी एक वार्षिक संचालन संगीत र प्रविधि महोत्सव प्रत्येक वर्ष इन्डियानापोलिसमा। यो एक उत्कृष्ट कार्यक्रम हो जहाँ हामी क्षेत्रीय ब्यान्डहरू ल्याउँदछौं र क्षेत्रीय बृद्धि मनाउनका लागि एक दिनको छुट्टीका साथै साथका लागि केही पैसा उठाउँदछौं। ल्युकेमिया र लिम्फोमा समाज.
हाम्रो एजेन्सी घटना को प्रमुख प्रायोजक हो, र त्यसपछि हामी सामान्यतया अन्य कम्पनीहरूलाई थप लागतहरू कभर गर्न पाउँछौं। दुर्भाग्यवस, यद्यपि प्रायोजन कोष प्राय: अन्तिम मिनेटमा आउँदछ ... धेरै योजनाको लागि समय छोड्नुहुन्न!
प्रविधिको लागि भलाइ धन्यवाद, यद्यपि! अर्को वर्ष, हामी घटनाको योजनालाई केहि परिवर्तन गर्दैछौं र यसलाई अधिक नियन्त्रणमा लिने छौं। एउटा निश्चित विचार जुन हामी निश्चित रूपमा कार्यान्वयन गर्न जाँदैछौं भनेको भनेको कार्यक्रमको टीशर्टको साथसाथै हाम्रा टिकटहरूको बिक्री जोड्ने अवसर हो। Eventbrite र Teespring केवल प्रणाली सेटअप गर्नुहोस्। केवल थप गर्नुहोस् Teespring अनुप्रयोग तपाइँको घटना र तपाइँको टी शर्ट सेटअप गर्न।
Teespring सँग ईटब्रिटको साझेदारीले तपाईंलाई द्रुत बजारमा आर्टवर्क अपलोड गर्न, तपाईंको मूल्य सेट गर्न, र तुरुन्तै एक अनलाइन पृष्ठ सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जहाँ सहभागी र प्रशंसकहरूले खरीद गर्न सक्दछन्। तपाईंको व्यापार पृष्ठ पछि तपाईंको घटना पृष्ठमा पदोन्नति हुन्छ।
जब तपाइँ तपाइँको अभियान समाप्त गर्न चाहानुहुन्छ, Teespring प्रिन्ट, प्याकेज र दुनिया भर मा तपाइँको खरीददारहरु लाई सबै अर्डर डेलिभर गर्दछ। तपाइँका उपस्थितहरूसँग सage्लग्न हुनुहोस् र प्रयास गर्नुहोस्!
खुलासा: त्यो हाम्रो हो ईन्टरब्रिट रेफरल प्रोग्राम लिङ्क।
टैग: घटना दर्ताकार्यक्रमचाडहरूमाव्यापारिकव्यापार बिक्रीटी-शर्टteespringटिकट